Oge oge na ndị enyi - Okwu Foundation
The Magazine Magazine
"Oge na ndị enyi" bụ Q & A atụmatụ nke Okwu magazin. N'etiti 1906 na 1916, ndị na-agụ akwụkwọ jụrụ ajụjụ ndị a edepụtara n'okpuru ebe a Okwu ma zara ya site n'aka Maazị Percival n'okpuru mkpesa "Enyi." Ka oge na-aga, anyị ekpebiela idebe aha ya dị ka onye dere azịza ya.
Na 1986, The Word Foundation mepụtara ụdị nke nkeji iri na ise Okwu magazin a ka na-ebipụta. Ọ nwekwara ngalaba “Oge na ndị enyi” nke nwere ajụjụ sitere n'aka ndị na-agụ akwụkwọ anyị yana azịza sitere n'aka ụmụ akwụkwọ ogologo oge.
Soro ndị enyi gụọ oge
Pịa ụbọchị ndị dị n'okpuru iji nweta azịza nke ajụjụ niile edepụtara n'okpuru ụbọchị ahụ.
Pịa a ajụjụ ka ị gaa azịza nke ajụjụ a.
Pịa na PDF n'ihi na ekewetde usoro nke mbụ.
• Kedụ ka anyị ga-esi mara ihe anyị bụ n’anụmanụ ikpeazụ anyị?
• Ànyị nwere ike ịkọ ugboro ole a mụrụ anyị tupu mgbe ahụ?
• Anyị maara n'etiti usoro ịlọ ụwa anyị?
• Gini bu echiche echiche nke Adam na Iv na omumu omumu banyere Adam?
• Kedu oge ogologo oge dị n'etiti ịlọ ụwa, ọ bụrụ na enwere oge akọwapụtara?
• Ànyị na-agbanwe ụdị mmadụ anyị bụ ma anyị laghachi n’ụwa?
• Ndi Theosophist kwenyere na nkwenkwe ụgha?
• Olee ihe ndabere maka nkwenkwe ụgha na onye a mụrụ site 'n'ọ' nwere ike nwere ikike ọgụgụ isi ma ọ bụ ike anwansi?
• Ọ bụrụ na enwere ike ibuga echiche nke onye ọzọ, gịnị mere na - emeghị nke a dịka o ziri ezi yana nwee ọgụgụ isi dị ka a na - eme mkparịta ụka nkịtị?
• Onwere ihe obula nke dikwa n’otu n’otu ebe echiche echiche?
• Kedụ ka anyị ga-esi jiri amamihe were mkparịta ụka?
• Ọ dị mma ịgụ ihe ndị ọzọ chere ma hà ga-agụ ya ma ọ bụ na anyị agaghị agụ ya.
• Gini mere o ji di nma karia ka aru mmadu aru oku mgbe o nwusirila kama itinye ya n'ili?
• Enwere eziokwu ọ bụla na akụkọ ndị anyị na-agụ ma ọ bụ nụ banyere, banyere vampires na vampirism?
• Kedu ihe kpatara ọnwụ mberede nke ndị mmadụ ma ha bụ nwata ma ọ bụ na nwata, mgbe ọ ga-egosi na ọtụtụ afọ bara uru na uto, uche na anụ ahụ, dị n'ihu ha?
• Ọ bụrụ na ejighi aka, ụkwụ, ma ọ bụ akụkụ ọzọ nke ahụ na-apụ apụ mgbe a na-ebipụ onye ahụ anụ ahụ, gịnị mere akụkụ ụra na-enweghị ike ịmepụta aka ọzọ ma ọ bụ ụkwụ?
• Onye Theosophist ọ bụ onye anaghị eri anụ ma ọ bụ onye na-eri anụ?
• Kedu ka ezigbo onye na-achọpụta na ọ ga - esi na-eri anụ ma ọ bụrụ na anyị maara na ọchịchọ anụ anụmanụ ahụ na - esi n'anụ ahụ nke anụ ahụ gaa n'anụ ahụ nke onye na - eri ya?
• Ọ bụghị eziokwu na ndị yogis nke India, na ndị ikom nke ihe omume Chineke, na-ebi na akwụkwọ nri, ma ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụghị ndị ga-azụlite onwe ha zere anụ ma na-ebi na akwụkwọ nri?
• Mmetụta dị aṅaa ka iri nri akwụkwọ nri nwere n'ahụ mmadụ, ma e jiri ya tụnyere iri anụ?
• Kedu ka vegetarianism ga-esi egbochi uche nke uche mgbe a gwara ndị anaghị eri anụ ka ha wee nweta ịta ahụhụ?
• Kedu ihe bụ isi ihe okwu ahụ pụtara, nke a na-eji ọtụtụ ndị na-ahụ maka ndị ọkà mmụta sayensị na ndị anwansi?
• Gịnị ka '' elemental human 'pụtara? Ọ dị ihe dị iche n'etiti ya na uche ala?
• Enwere isi ihe na-achịkwa ọchịchọ ahụ, onye ọzọ na-achịkwa ikike ndị dị mkpa, onye ọzọ na-achịkwa ọrụ ahụ, ma ọ bụ usoro ihe omume mmadụ na-achịkwa ihe ndị a niile?
• Otu nkuzi nke ime mmụọ ahụ ọ na-achịkwa ma ọ bụ ihe ndị ọ maara na arụmọrụ na-amaghị ihe nke ahụ?
• Ndi mmewere mmadu n'ime ihe ndi mmadu na-agbanwe agbanwe, ma ha nile ma obu nke o bula n'ime ha ga-abu ndi mmadu?
• Ọ ga-ekwe omume na mmadụ ga-ahụ n'ọdịnihu?
• Ọ gaghị ekwe omume ịhụ otu ọnọdụ nke oge gara aga na ọnọdụ dịka ha ga-abụ n'ọdịnihu dị ka ọhụụ na nke doro anya ka ọ na-ahụ ugbu a?
• Kedu ka mmadụ ga - esi hụ ihe doro anya mgbe ịhụ dị otú a megidere ahụmahụ anyị niile?
• Kedu akụkụ ndị e ji mee ihe na clairvoyance, oleekwa otú e si esi n'ihe ndị dị nso na ndị nọ n'ebe dị anya, site na ihe a na-ahụ anya nke a na-adịghị ahụ anya?
• Ndi anwansi na-ele anya n'ọdịnihu mgbe obula o choro, ma o na - eji ngalaba ndi ozo mee ya?
• Ọ bụrụ na anwansi nwere ike ịpuchi ihe mkpuchi mere na-adịghị eme anwansi, n'otu n'otu ma ọ bụ na-erite uru site na ha maara ihe ndị na-abịanụ?
• Kedu ihe bụ "anya atọ" na onye na-ahụ anya na onye mgbaasị ji ya?
• Kedu onye na-eji eriri akpụkpọ anụ, gịnịkwa bụ ihe eji ya eme ihe?
• Kedu ka anya nke atọ ma ọ bụ gọọmenti na-emeghe, gịnịkwa na-eme na nkwụghe dị otú ahụ?
• Krismas ọ nwere ihe ọ bụla pụtara na onye ọkachamara, ma ọ bụrụ otú ahụ, gịnị?
• Ọ ga-abụ na Jizọs bụ onye dị adị n'ezie nakwa na a mụrụ ya n'ụbọchị Krismas?
• Oburu na Jisos bu nwoke n'ezie, gini mere na ayi enweghi ihe omuma banyere omumu ma obu ndu nke onye di otua kari okwu nke akwukwo nso?
• Gịnị mere ha ji akpọ nke a, 25th nke Disemba, Christmas kama Jesusmass ma ọ bụ Jizọsday, ma ọ bụ site na aha ọzọ?
• Enwere uzo nwere ike isi mata omumu na ndu nke Jisos?
• Ị kwuru banyere Kraịst dịka ụkpụrụ. Ị na-eme ọdịiche n'etiti Jizọs, na Kraịst?
• Kedu otu ihe mere eji eme ememe ụbọchị 25th dị ka nke ọmụmụ Jizọs?
• Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ka mmadụ ghọọ Onye Kraịst, olee otú e si arụzu ya na otu esi ejikọ ya na 25th ụbọchị Disemba?
• Ọ dị njọ iji ụbụrụ mee ihe kama iji aka anụ ahụ gwọọ ọrịa ahụ?
• Ọ dị mma ịnwa ịgwọ ọrịa ahụ site na nyocha echiche?
• Ọ bụrụ na ọ dị mma iji gwọọ ọrịa ahụ site na ọgụgụ isi, inye nsogbu ahụike nwere mmalite echiche, gịnị kpatara na ọ dị njọ maka onye ọkà mmụta sayensị ma ọ bụ onye Kraịst iji gwọọ ọrịa ndị ahụ site na ntụgharị uche?
• Gịnị mere o ji dị njọ ka ndị ọkà mmụta sayensị nweta ego maka ịgwọ ọrịa anụ ahụ ma ọ bụ uche mgbe ndị dọkịta na-akwụ ụgwọ ụgwọ ha?
• Gịnị mere na ọ bụghị ihe ziri ezi ka onye ọkà mmụta sayensị nweta ego maka ịgwọ ọrịa mgbe ọ na-etinye oge niile ya n'ọrụ a ma nwee ego iji dịrị ndụ?
• Kedu ka ihe okike si enye onye n'eziokwu na-achọ ịbara ndị ọzọ uru, mana onye na-enweghị ike ịkwado onwe ya?
• Ndị ọkà mmụta sayensị ndị Kraịst na ndị nwere ọgụgụ isi adịghị eme ihe ọma ma ọ bụrụ na ha na-agwọ ọrịa ebe ndị dọkịta na-ada ada?
• Kedu ihe dị mkpa anyị nwere banyere ihe ndị dị mkpa uche nke ọkà mmụta sayensị kwesịrị inwe?
• N'ụzọ dị aṅaa ka ikike ịgbaso ọrụ nke aka gị ma ọ bụ nke onye ọzọ, na iji hụ ihe kpatara ya, na-akwado nkwupụta nke ndị ọkà mmụta sayensị na ndị Kraịst?
• Kedu ihe si na nbata na omume nke ozizi nke ndị Kraịst ma ọ bụ ndị ọkà mmụta sayensị uche?
• Gịnị mere ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa uche ji baa ọgaranya ma ọ bụrụ na ha adịghị agwọ ọrịa, ma ọ bụrụ na ha abụghị ihe ha na-anọchite anya onwe ha, ndị ọrịa ha agaghị achọpụta eziokwu ahụ?
• Ọ bụ na Jizọs na ọtụtụ ndị nsọ adịghị agwọ ọrịa nkịtị site na ọgụgụ isi ma ọ bụrụ na ọ dị njọ?
• Ọ bụrụ na ọ dị njọ ịnweta ego maka ịgwọ ọrịa ọrịa site na ntụgharị uche, maọbụ maka inye "nkuzi sayensị," ọ bụ na ọ dịghị njọ ka onye nkụzi ụlọ akwụkwọ nata ego maka ịkụzi ụmụ akwụkwọ na mpaghara ọ bụla nke mmụta?
• (N'akwụkwọ ozi na nchịkọta akụkọ, March 1907 "Oge na Ndị Enyi" ka a na-enyo, a na-azaghachi ya n'aka Mr. Percival.-Ed.)
• Onye Kristain na-ekwu na Mmadụ Nwere Ahụ, Mkpụrụ obi na Mmụọ. Theosophist kwuru na mmadụ nwere isi asaa. N'okwu ole na ole olee ihe asaa a?
• Na okwu ole na ole ị nwere ike ịgwa m ihe na-eme mgbe ọnwụ?
• Ọtụtụ ndị na-ekwu na ha na-ahụ maka ofufe Chineke na mkpụrụ obi ndị ahụ hapụrụ ahapụ na-akparịta ụka. Theosophists na-ekwu na nke a abụghị ikpe; na ihe a na - ahu anya abughi mkpuru obi kamakwa shei, anu aru ma obu ochicho obi nke nkpuru obi ji ghafu. Ònye ziri ezi?
• Ọ bụrụ na mkpụrụ obi nke mmadụ nwere ike ịbụ onye mkpọrọ mgbe ọnwụ site na ọchịchọ anụ ahụ, gịnị nwere ike ọ gaghị adị ndụ a na-egosi na ọhụụ na n'ihi gịnị ka ọ na-ezighị ezi ikwu na ọ pụtaghị na-ekwurịta okwu na oche?
• Ọ bụrụ na ọhụụ dị iche iche bụ naanị ụbụrụ, ọnyá ma ọ bụ ọchịchọ anụ ahụ, nke mkpụrụ obi mmadụ na-emebisị mgbe ọ nwụsịrị, gịnị mere ha ji enwe ike iji nkwurịta okwu na-ekwurịta okwu n'isiokwu a maara naanị onye ahụ gbasara ya, gịnị mere ọ bụ na otu isiokwu ahụ ka a ga-ebulite ugboro ugboro?
• Eziokwu a enweghị ike ịgọnahụ na mmụọ na-ekwu mgbe ụfọdụ eziokwu ma nyekwa ndụmọdụ ma ọ bụrụ na esoro ya ga-ebute uru nke ndị niile metụtara. Kedu ka onye na-ahụ maka nkà mmụta okpukpe, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-emegide ime mmụọ, ịgọnahụ ma ọ bụ kọwaa ihe ndị a?
• Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ọ dịghị ma e wezụga shells, spooks na ụlọ ọrụ ndị na-enweghị manas pụta, dị ka ozizi nkà mmụta, na oge, ebe na-abịa ihe ọmụma na ozizi nke a nkà ihe ọmụma na mgbe aosophical nature, nke ụfọdụ mediums nwere natara?
• Ndị nwụrụ anwụ hà na-arụ ọrụ n'otu n'otu ma ọ bụ n'otu n'otu iji ruo ọgwụgwụ ụfọdụ?
• Kedu ka ndị nwụrụ anwụ si eri, ọ bụrụ na ọ dị? Gịnị na-akwado ndụ ha?
• Ndị nwụrụ anwụ hà na-eyi uwe?
• Ndị nwụrụ anwụ hà bi n'ụlọ?
• Ndị nwụrụ anwụ hà na-ehi ụra?
• Ndị nwụrụ anwụ hà na-ebi n'ezinụlọ, n'obodo, ma ọ bụrụ na e nwere ọchịchị?
• Enwere ntaramahụhụ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ maka ọrụ ndị nwụrụ anwụ na-eme, ma n'oge ndụ maọbụ mgbe ọnwụ gasịrị?
• Ndị nwụrụ anwụ hà na-enweta ihe ọmụma?
• Ndị nwụrụ anwụ hà maara ihe na-eme n'ụwa a?
• Kedu ka ị ga-esi kọwaa ebe ndị nwụrụ anwụ pụtara ma ọ bụ na nrọ, ma ọ bụ ndị na-amụ anya, ma kwupụta na ọnwụ nke ndị ụfọdụ, n'ozuzu ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ, dị nso?
• Ndi ndi nwuru anwu achoro ndi ozo banyere ihe ezinulo ha mgbe ha no n'uwa, ma ha na eche ha nche; ekwu nne na-ahapụ ya maka ụmụaka ya?
• Na ụwa nke ndị nwụrụ anwụ, e nwere otu anyanwụ na ọnwa na kpakpando dị ka ụwa anyị?
• Ndi ndi nwuru anwu nwere ike iduzi ndi di ndu n'enweghi ihe omuma ndi di ndu, site n'inye echiche ma obu omume?
• Onye ọ bụla maara ebe etiti dị gburugburu bụ nke anyanwụ anyị na mbara ala ya yiri ka ọ na-agbanwe? Agụwo m na ọ nwere ike ịbụ Alcyone ma ọ bụ Sirius.
• Ihe na-eme ka obi mmadu tie aka; ọ bụ ụda mmiri nke ebili mmiri site na anyanwụ, gịnịkwa banyere iku ume?
• Kedu ihe jikọrọ obi na ọrụ nwoke na nwanyị-nakwa iku ume?
• Ego ole ka ọnwa na mmadụ na ndụ ndị ọzọ dị n'elu ụwa dị?
• Anyanwụ ma ọ bụ ọnwa ọ na-achịkwa ma ọ bụ na-achịkwa oge ndị Katọlik? Ọ bụrụ na ọ bụghị, gịnị ka?
• Ị nwere ike ịgwa m ihe ọ bụla banyere ụdị ọkụ ma ọ bụ ire ọkụ? Ọ dịka ihe kachasị njọ. Enweghị m ike inweta ozi na-enye afọ ojuju site na akwụkwọ sayensị.
• Kedu ihe kpatara nnukwu nkwutọ, dịka ọkụ na oku nke yiri ka ọ na-esite n'otu akụkụ nke obodo n'otu oge ahụ, gịnịkwa bụ nkwụsịtụ na-enweghị isi?
• Olee otú e si akpụ ọla ndị dị ka ọla edo, ọla kọpa na ọlaọcha?
• Ị kwenyere ịgụ kpakpando dị ka sayensị? Ọ bụrụ otú ahụ, olee otú ọ ga-esi were ya dị ka ihe gbasara ndụ mmadụ na ọdịmma ya?
• Gịnị mere oge ịmụ nwa n'ime ụwa nkịtị ji emetụta ọdịnihu nke ego ahụ?
• Kedu ka oge ịmụ nwa si akọwa njedebe mmadụ n'ụwa?
• Kedu ka mmetụta ndị a na-enwe mgbe a mụrụ, ma ọ bụ ọdịnihu, kwadoro karma nke ego ahụ?
• Ndi mmetụta uwa bu ndi ozo iji nyere ndi mmadu aka karma? Ọ bụrụ otú ahụ, ebee ka nnwere onwe ga-abata?
• N'ihi gịnị ka a na-ekwu mgbe ụfọdụ na Jizọs bụ otu n'ime ndị nzọpụta nke ihe a kpọrọ mmadụ nakwa na ndị oge ochie nwere ndị nzọpụta ha, kama ikwu na ọ bụ Onye Nzọpụta nke ụwa, dịka Krisendọm na-edebe?
• Ị nwere ike ịgwa anyị ma ọ bụrụ na e nwere ndị ọ bụla na-eme ememe ncheta nke ndị nzọpụta ha ma ọ bụ gburugburu ụbọchị iri abụọ na ise nke December (n'oge a gwara anyanwụ ka ọ banye na Capricorn?
• Žf] d kwuru na] mm¹m¹m¹ Kraist b ime ime mm]. Ọ bụrụ na ọ dị otú ahụ, gịnị mere ememe Krismas maka ahụ anụ ahụ site na iri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, n'ụzọ nkịtị, nke dị iche na nghọta anyị banyere ọnọdụ ime mmụọ?
• Na "Oge oge na ndị enyi," nke Vol. 4, 189 nke XNUMX, a na-ekwu na Krismas pụtara "Ọmụmụ nke ìhè anyanwụ a na-adịghị ahụ anya, Kraịst Ụkpụrụ," nke, ka ọ na-aga n'ihu, "A ghaghị ịmụ mmadụ." Ọ bụrụ na nke a bụ, amu Jisos bu kwa n'abali iri abuo na ise nke December?
• Oburu na Jisos ma obu Kraist adigh ndu na izi ihe dika o kwesiri ime, olee ot 'o si buru na njehie di otua nwere ike imeri otutu oge?
• Ị na-ekwu na akụkọ ihe mere eme nke Iso Ụzọ Kraịst bụ ihe efu, na ndụ nke Kraịst bụ akụkọ ifo, nakwa na ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2,000 afọ ụwa nọ na-ekwere n'echiche ụgha?
• Ọ bụrụ na ọgụgụ isi astral nwere ike ịhụ ihe ọ bụla, gịnị mere na ọ dịghị njide mmụọ nke onye na-ajụ ya nwere ike izute ugbu a na-ama na-atụle ule?
• Kedu nkọwa nke Theosophy na-enye maka ala ọma jijiji ndị dị egwu nke na-emekarị, nke nwere ike ibibi ọtụtụ puku mmadụ?
• GŽnŽ b ihe dŽ nime Chineke ma] b nke dŽ nime Onye Kasị Elu?
• Kedu ihe bụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ nke ahụ pituitary?
• Kedu ihe iji ma ọ bụ ọrụ nke glandal pine?
• Kedu ihe ojiji ma ọ bụ ọrụ nke splin?
• Kedu ihe ojiji ma ọ bụ ọrụ nke thyroid glands?
• Ndi umu anu na eche ha?
• Ndi mmadu ga - eme ka ihe ojoo ojoo bia site n'onu anu ulo?
• Enwere ala ọ bụla maka nkwupụta nke ndị na-ekwu na mkpụrụ obi nke ndị ikom si n'ime mmadụ banye n'ime nnụnụ na anụmanụ?
• Nwere ike ịkọwa nke ọma otu echiche dị iche iche mmadụ si eme n'okwu gbasara ụwa nkịtị wee mepụta ụdị anụmanụ dị iche iche dịka ọdụm, anụ ọhịa bea, ekwuru ụlọ, rattlesnake? Chee echiche.-Ed.)
• Onye nwere ike ile anya n'ime ahụ ya ma hụ ọrụ nke akụkụ dị iche iche, ma ọ bụrụ otú ahụ, olee otú a ga-esi mee nke a?
• Na ihe dị mkpa dị aṅaa ka ụwa mbara igwe dị iche na nke ime mmụọ? A na - ejikarị okwu ndị a eme ihe na akwụkwọ na magazin ndị na - ekwu banyere isiokwu ndị a, nke a na - ekwesị ịmegharị uche nke onye na - agụ ihe.
• Ọ bụla akụkụ nke ahụ bụ ihe ọgụgụ isi ma ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ ya na-akpaghị aka?
• Ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla ma ọ bụ akụkụ nke ahụ ahụ nọchiri anya ya, oleezi ihe mere onye nzuzu anaghị eji eji ahụ ya eme ihe mgbe ọ tụfuru uche ya?
• O yighị ka ihe ezi uche dị na ya na echiche abụọ ma ọ bụ karịa nwere ike ịbụ eziokwu banyere eziokwu ọ bụla. Gini mere otutu echiche banyere ufodu nsogbu ma obu ihe? Oleezi otu anyi ga - esi nwee ike igosi onye uche ya bu eziokwu na ihe eziokwu bu?
• Gịnị mere e ji nye nkume dị oké ọnụ ahịa na ọnwa ole na ole n'afọ? Ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ kpatara nke a karịa ụdị mmadụ?
• Nkume diamond ma ọ bụ nkume ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa ọ bara uru karịa nke a na-anọchi anya ego? ma, ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ka ọnụ ahịa diamond ma ọ bụ nkume ndị ọzọ dị?
• Mmụọ ahụ ọ na-eme ihe na mmadụ na ihe ndị bụ mmụọ?
• Ọ bụ na e nweghị nkwenkwe na ndị Atlanta nwere ike ịgba? Ọ bụrụ otú ahụ, olee ebe nkwenye dị otú ahụ kwuru?
• Ndi mmadu ndi na-anwa ichota nsogbu nke ikuku ikuku, ndi di n'Afrika Atlanta?
• Ọ bụrụ na ndị Atlanta edoziwo nsogbu nke ikuku ụgbọelu, ma ọ bụrụ na ndị na-echegbu otu nsogbu ahụ ugbu a bụ ndị Atlanta, gịnịzi mere ndị a anaghị alaghachi azụ kemgbe nkwụsị nke Atlantis na tupu oge ugbu a, ma ọ bụrụ na ha amaliteghachi ndụ tupu oge dị ugbu a, gịnị mere na ha enwebeghị ike ijide ikuku ma ọ bụ na-efe efe tupu oge a?
• Ndi anyi ma obu na anyi adighi n'otu onma-buddhi?
• Ọ bụghị eziokwu na ihe niile anyị nwere ike ịghọ bụrịrị n'ime anyị na ihe niile anyị nwere ike ime bụ ịmara ya?
• Ọchịchịrị na enweghị ìhè, ma ọ bụ na ọ bụ ihe dị iche na ya onwe ya na nke na-ewe ebe ìhè? Ọ bụrụ na ha dị iche ma dị iche, gịnị bụ ọchịchịrị na ihe bụ ìhè?
• Kedu ihe bụ ụbụrụ na olee otu ọ ga - esi kwe omume iji tụfuo ike dị ukwuu n'enweghị ihe mkpofu ọ bụla yiri ya na ọnwụ nke ike ya na ahụ ya, oleekwa ebe isi iyi redio ya dị?
• Ọ nwere ike ịzụlite ụdị ọhụrụ nke akwukwo nri, mkpụrụ osisi ma ọ bụ osisi, dị iche iche ma dị iche na ụdị ọ bụla ọzọ a maara? Ọ bụrụ otú ahụ, olee otú e si eme ya?
• Ọ ga-ekwe omume ma ọ dị mma ile anya n'ọdịnihu na ịkọ ihe omume n'ọdịnihu?
• Ọ ga-ekwe omume itinye echiche n'echiche? Ọ bụrụ otú ahụ, olee otú e si eme nke a; kedu otu mmadu puru isi burughachi ya ma wepu ya n'uche?
• Ihe ndị so na Ọchịchị Nzuzo nwere mmetụta nke ịlaghachi azụ ma ọ bụ ịkwalite uche na mmalite ya? O kwere omume inweta ihe n’efu?
• Ntak emi mme owo ẹyomde ndinam n̄kpọ ke ntak? Kedu ka ndi mmadu ndi choro inweta ihe n'efu, ghaghi ugwo maka ihe ha nwetara?
• Kedu ihe dị iche iche dị n'etiti Theosophy na New Thought?
• Kedu ihe kpatara ọrịa kansa? Enwere ọgwụgwọ ọ bụla a maara maka ya ma ọ bụ ka a ga-achọpụta usoro ọgwụgwọ tupu a gwọọ ya?
• Gini mere ndi mmadu di iche iche ji choo di iche iche? Mgbe ụfọdụ a na-ekwu agwọ dịka onye nnọchianya nke ihe ọjọọ, na oge ndị ọzọ dịka akara nke amamihe. Gini mere mmadu ji nwee egwu egwu di otua nke agwo?
• Enwere eziokwu ọ bụla na akụkọ ndị Rosicrucian nwere ọkụ ọkụ? Ọ bụrụ otú ahụ, olee otú e si mee ha, olee nzube ha ji jeere ya ozi, ma è nwere ike ịme ha ma jiri ya mee ihe ugbu a?
• Gịnị mere ugo ji mee ihe dị ka ihe nnọchianya nke mba dị iche iche?
• Ndi ugo abua nke bu isi ugbua eji eme ihe dika ala mba nke mba ufodu, nke acho kwa na ihe ndi ncheta nke ndi Heth oge ochie, neme ka aru madu no?
• Na mpaghara anọ na ọkara nke gburugburu na Masonic Keystone nke Royal Arch Chapter bụ akwụkwọ ozi HTWSSTKS Ha nwere njikọ ọ bụla nke Zodiac, gịnịkwa ka ọnọdụ ha gburugburu gburugburu na-egosi?
• Kedu ihe na-atọ ụtọ na nri?
• Enwere uto na nri ọ bụla bara uru dị ka ihe oriri na-abụghị nri?
• Olee otu onye ga - esi chebe onwe ya megide ụgha ma ọ bụ nkwutọ ndị ọzọ?
• Kedu ka ụmụ anụmanụ ndị na-agba ume na-ebi na-enweghị nri ma o yikarị ka ha enweghị ikuku n'oge ogologo oge ha na-ama jijiji?
• Anumanu nwere ume na-adighi ndu? Ọ bụrụ otú ahụ, olee otú o si ebi ndụ?
• Ndi sayensị enyocha iwu ọ bụla nke mmadụ ga-ebi na-enweghị nri na ikuku; ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụ ụmụ nwoke ka ha bi, gịnịkwa bụ iwu?
• Gini mere eji kewaa oge?
• Nwere oge na nkewa ya n'ime afọ, ọnwa, izu, ụbọchị, awa, nkeji na nkeji ọ bụla ederede na usoro ahụike ma ọ bụ ndị ọzọ na ahụ mmadụ? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị bụ akwụkwọ ozi ahụ?
• Mmadụ nwere ike ibi ndụ, mechie ọrụ nke, ma nwụọ karịa ihe karịrị otu ndụ n'oge ọ gbasabere n'ụwa a?
• Enwere ike iji akwụkwọ aka mee ihe ndị mbụ, site n'iji arụ ọrụ dị mgbagwoju anya; ọ bụrụ otú ahụ, ụdị ụdị dị iche iche nwere ike ịmepụta na otu esi eme ya?
• Kedu ka a ga - eji mee aka n'ịgwọ ọrịa nke anụ ahụ ya ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke ahụ?
• Gịnị dị mkpa maka ibuwanye na nraranye?
• Kedu ihe bụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na ogologo oge ka ọ dị?
• Enwere uru ọ bụla a na-enweta site n'ịkụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, n'oge ntụgharị uche?
• Enwere ike ịhụ ihe ọkụkụ na-esi ísì ụtọ na nke ọ bụla n'ime ụgbọelu ahụ?
• Ụdị agba ndị dị aṅaa, ọla na nkume ka e depụtara ụwa asaa ahụ?
• Kwesịrị iji agba, ọla na nkume ga-ekpebi site n'akụkụ nke mbara ala ahụ nke a mụrụ onye na-amụrụ ya?
• Ndi agba, ọla na nkume ọ bụla nwere àgwà ọma pụrụ iche, oleekwa otú a ga-esi eyi ha n'emeghị ka mbara ụwa dị?
• Kedu akwụkwọ ozi ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ na-agbakwunye ma ọ bụ tinye ha na mbara ụwa?
• Nwoke ọ bụ microcosm nke macrocosm, eluigwe na ụwa na obere? Ọ bụrụ na ọ dị, mbara ala na kpakpando a na-ahụ anya ga-anọchite anya ya. Ebee ka ha dị?
• Gịnị ka ahụike pụtara n'ozuzu ya? Ọ bụrụ na ọ bụ njikarị nke ume anụ ahụ, nke uche na nke mmụọ, oleezi otu esi edozi nsogbu ahụ?
• Ọ dị mma ka nwoke hapụ ahụ ya n'amaghị ama, na mkpụrụ obi nwere ike ịbanye n'ọnọdụ nrọ ya?
• Kedu ịdị elu nke mkpụrụ obi na-eru nso bụ ndị na-ahapụ anụ ahụ ha maara nke ọma na ndị nọgidere na-adị ndụ mgbe ọnwụ nwụsịrị?
• Biko nye nkọwa nke anwụghị anwụ ma kọwaa n'ụzọ dị mkpirikpi otú anwụghị anwụ ga-esi mezuo?
• Ihe na-amasị mmadụ ma na-enweghị mmasị n'echiche nke mkpụrụ obi ya? Ọ bụrụ otú ahụ, olee otú e si egosipụta ha? Ọ bụrụ na ọ bụghị, olee ebe ndị a na-adịghị amasị ha?
• Ọ dị mma ka nwoke ghara igbochi agụụ mmekọahụ ọ na-enwe, ọ bụrụkwa na ọ gbalịsie ike ibi ndụ nke enweghị mmekọahụ?
• Kedu ihe bụ isi nke ozizi nke mkpuchi mmehie ahụ, oleekwa otu esi eme ka ya na iwu karma?
• Kedu ihe bụ ịchị ọchị, gịnị mere ndị mmadụ ji achị ọchị?
• Gịnị bụ njikọ dị n'etiti magnetism na gravitation, oleekwa otú ha si dị iche, ọ bụrụ na ọ dị? Kedu ihe bụ njikọ dị n'etiti magnetism na magnetism anụmanụ, oleekwa otú ha dị iche, ọ bụrụ na ọ dị?
• Kedu otu ọgwụgwọ nke magnetism anụmanụ si eme?
• Ndi magnetism anụ, mesmerism, na hypnotism na-emetụta, ma ọ bụrụ otú ahụ, olee otú ha si kọọ?
• Kedu ka a ga - esi rụọ ọrụ magnetism anụmanụ, oleekwa ihe eji eme ya?
• Kedu ihe bụ isi ísì; kedu ka o si eme; na-eme ihe ndị dị n'ime ahụ na-emepụta ihe mmetụta ahụ, oleekwa akụkụ nke egwu na-adị na ndụ?
• Kedu ihe bụ echiche? Kedu ka a pụrụ isi zụlite ma jiri ya?
• Kedu ọrịa na njikọ dị aṅaa nwere nje bacteria na ya?
• Kedu ihe bụ cancer ma nwere ike ịgwọ ya, ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịgwọ ọrịa, gịnị bụ ọgwụgwọ?
• Kedu ụzọ dị mma isi jikọta ọnọdụ nke edemede na nrọ nke mere na ọ dịghị etiti oge onye onye na-ehi ụra na-amaghị?
• Gịnị na-agba anyị ume ịkwasa ozi ọma maka echiche anyị? Ruo n'ókè ha aṅaa ka anyị na-ekwe ka anyị megide echiche nke ndị ọzọ?
• Kedu ka o si bụrụ nsogbu ndị mebiri mgbalị niile ma yie ihe na-agaghị ekwe omume ngwọta n'oge oge ezipụ kwesịrị idozi n'oge ụra ma ọ bụ ozugbo edemede?
• Kedu ihe bụ ncheta?
• Gịnị na-akpata ọnwụ nke ncheta?
• Gịnị na-eme ka mmadụ chefuo aha aka ya ma ọ bụ ebe ọ dị ndụ, ọ bụ ezie na ncheta ya nwere ike ghara ịda mbà n'akụkụ ndị ọzọ?
• Gịnị ka okwu a bụ "Mkpụrụ obi" pụtara? Oleekwa otú e kwesịrị isi jiri mkpụrụ obi mee ihe?
• Ọ bụghị ozizi Theosophica nke nhụjuanya anyị n'elu ụwa dịka ụgwọ ọrụ karma, na ngwugwu nke nkwupụta ụkọchukwu nke nhụjuanya anyị dịka ụgwọ ọrụ na hel, na nkwupụta abụọ ahụ aghaghị ịnakwere n'okwukwe nanị; na, n'ihu, otu dị mma dịka onye nke ọzọ na-emepụta ịdị mma omume?